Raveloaritiana Mamisoa · Desambra 2018 · Global Voices teny Malagasy
Raveloaritiana Mamisoa · Desambra, 2018
Lahatsoratra farany an'i Raveloaritiana Mamisoa tamin'ny Desambra, 2018
Però: Bilaogera avy ao Ica
Amerika Latina 29 Desambra 2018
Ny tanànan'i Ica no tena voakasiky ny horohorontany Peroviana manokana vao haingana. Maro amin'ireo fanavaozam-baovao sy antso ho an'ny firaisankina no avy amin'ireo bilaogera ao an-tanànan'i Lima. Nikaroka ireo bilaogera avy ao an-tanànan'i Ica ny mpanoratra ao amin'ny GV, Juan Arellano ary nahita ireto bilaogy ireto.
Però: Mankany amin'ny fihodinana faharoa
Amerika Latina 27 Desambra 2018
Tapitra ny fifidianana tany Però, saingy hiverina izany satria tsy nanambara ampahibemaso ny zavatra efa fantatsika rehetra izy ireo: hisy ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana ary i Ollanta Humala sy Alan García no hifaninana amin'izany.
Arabia Saodita: Avy indray ny orana ao Jeddah
Niharan'ny orambe indray ny tanàna seranan-tsambo Ranomasina Mena ao Jeddah, Arabia Saodita, mamerina indray ny tenifototra #Jeddahrain malaza ao amin'ny Twitter. Ireto manaraka ireto ny fanehoan-kevitr'ireo mpiondana aterineto, izay naneho ny fahatezerany tamin'ny kolikoly sy ny fahasimban'ny fotodrafitrasan'i Jeddah.
Azia Afovoany sy Kaokazy 12 Desambra 2018
Dika 10 Desambra 2018
Israely: Tsy nanaiky hamoaka dokambarotra manasongadina ny fitarihan'ny vehivavy Israeliana ny Ms. Magazine
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 09 Desambra 2018
Tamin'ny fihetsika mahagaga tamin'ny herinandro lasa, tsy nanaiky ny dokam-barotra nanasongadina ny fitarihan'ny vehivavy Isiraeliana amin'ny fanompoam-bahoaka ny Ms. Magazine.
Meksika: Herisetra mifandraika amin'ny zava-mahadomelina ao Tijuana
Amerika Latina 09 Desambra 2018
Nanjaka manerana ny firenena ny herisetra teo amin'ny manampahefana Meksikana sy ireo mpikambana ao amin'ny fikambanan-jiolahy amin'ny zava-mahadomelina ka namoizana aina marobe sy fiarahamonina mahatsapa ho tsy mahavita azy. Niezaka nanakana ny fitomboan'ny herisetra ny governemanta Meksikana tamin'ny alàlan'ny fandefasana polisy federaly sy miaramila any amin'ireo faritra tena voakasika indrindra.
Amerika Latina 06 Desambra 2018
Ekoadaoro: Ny feon'ny findaiko sy ny fitantarana isan'andro ataon'olontsotra
Ao amin'ny faritra saro-dalana manodidina an'i Quito, Ecuador, napetraka ny kamiao kely norakofana tsara nandritra ny tontolo andro mba hampianatra momba ny tontolon'ny asa fanaovan-gazetin'olon-tsotra. Ahitana seza maro ary koa birao mihitsy aza ao anatin'ilay fiara, antsoina hoe "Mi Voz Móvil" (Ny Feon'ny Findaiko), ampy tsara handraisana mpanao gazety.